Amaphilisi anconywa kakhulu anepensela yokubhala nokudweba
Izinhlelo zokusebenza ze-iPad
Izinhlelo zokusebenza ze-Android
Ithebhulethi enekhamera enhle
Ithebhulethi engu-10 intshi Iyiphi ongayithenga?
Iyiphi i-iPad okufanele uyithenge?
I-Las ithebhulethi enepeni ledijithali Bangakuvumela ukuthi wenze imisebenzi ngendlela enethezeke kakhulu kunokumane usebenzise umunwe wakho esikrinini sokuthinta, kanye nokulungela ukuthuthukisa eminye imisebenzi yokudala, njengokuthatha amanothi abhalwe ngesandla kube sengathi ukuwenza ephepheni, njengokuthi amanothi, adwebela imibhalo efundelwa izifundo, aphatha izinhlelo zokusebenza ezithile ngokunemba okukhulu uma uzisebenzisa njengesikhombi, kanye nokudweba nemibala, okungahle kube kuhle ngisho kwabancane ...
1 Amathebulethi angcono kakhulu ane-stylus
1.1 I-Samsung Galaxy Tab S7 + S-Pen
1.2 I-Apple iPad Air + Ipensela 2nd Gen
1.3 IHuawei MatePad 11 + M-Pen
2 Yini engenziwa ngethebhulethi ngepeni?
3 Ingabe wonke amapeni ethebhulethi ayafana?
Amathebulethi angcono kakhulu ane-stylus
Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi ithebhulethi enepensela okufanele uyithenge, lapha ungabona ezinye zazo amabhrendi namamodeli awo anikeza imiphumela engcono kakhulu, futhi kukhona kuzo zonke izabelomali:
2020 Apple iPad Air (kusuka ...
I-2021 Apple iPad Pro (kusuka ...
I-Samsung Galaxy Tab S7 -...
I-HUAWEI MatePad Pro -...
I-Samsung Galaxy Tab S7 + -...
I-Samsung Galaxy Tab S7 + S-Pen
I-Samsung ingomunye wabakhiqizi ababili bethebulethi be-Android abahlonishwa kakhulu. I-Galaxy Tab S7 yakho zamaphilisi anamandla kakhulu emaketheUkunethezeka ezandleni zakho ongaphinda ukusebenzise ne-S-Pen edumile evela kulo mkhiqizi waseNingizimu Korea. Ngalesi sesekeli ungabhala, udwebe noma ufake umbala, konke ngokushelela okuphezulu ngenxa yokubambezeleka okuphansi nokunemba kwakho. Iphinde ibe nomklamo oqaphe kakhulu, onempilo yebhethri ende, isisindo esincane, ukuthinta okujabulisayo, kanye nokusebenza okuningi okuhlakaniphile.
Ngokuqondene nehadiwe yethebhulethi, ungajabulela a enamandla kakhulu i-Qualcomm Snapdragon 865+ chip 8-core ngokusebenza okuhle, kanye nenye yezithombe ezithembisayo, i-Adreno GPU. Iphinde iza no-6 GB we-LPDDR4x uhlobo lwe-RAM, ukuthola isivinini esiphezulu nokusetshenziswa okuphansi. Isikrini sale thebhulethi singu-11 ″, sinokulungiswa kwe-QHD nezinga lokuvuselela elifika ku-120Hz.
Kodwa uma lokho kubonakala kukuncane kuwe, kufaka phakathi inkumbulo yohlobo lwesitoreji sangaphakathi se-128-256 GB, kanye nemakrofoni edidiyelwe yekhwalithi, amakhamera angaphambili nangemuva we-8 ne-13 MP ngokulandelana, izikhulumi. I-Dolby Atmos AKG, kanye nebhethri ye-Li-Ion engu-8000 mAh yokuzimela isikhathi eside, kanye nokusekelwa kokushaja okusheshayo okungu-45W. Vele, mayelana nokuxhumana ungakhetha phakathi kwe-WiFi + Bluetooth, noma phakathi kwenguqulo ye-WiFi + LTE + Bluetooth. Ngobuchwepheshe be-LTE ungakwazi ukwengeza i-SIM khadi futhi ube nenani ledatha yeselula ukuze uxhumeke nomaphi lapho udinga ...
I-Apple iPad Air + Ipensela 2nd Gen
Enye enye indlela enhle ye-Samsung, nakuba ibiza kakhulu, i-Apple iPad Air. Imodeli kweziyinkimbinkimbi kakhulu, ezinokwethenjelwa nezithuthukile zomhlaba. Ithebhulethi eyikhethelo engu-10.9 ″ ngosayizi, enephaneli ye-Retina yokucaca okuphezulu kanye nekhwalithi ecijile ezithombeni zayo. Ipensela lakho lepensela lingelinye lamapensela anokuzimela okuhle kakhulu, ukudweba, ukubhala amanothi, ukufaka imibala, nokushintsha imisebenzi kuzinhlelo zokusebenza ngokuthinta komzimba noma ukuthinta.
Ngokuqondene nesistimu yokusebenza, iza ne-iPadOS, enikwa amandla yi-hardware ye-otherworldly, efana nayo Chip ye-A14 Bionic enama-cores asebenza kahle kakhulu, ama-GPU asekelwe ku-PowerVR asebenza kahle kakhulu, ama-Neural Engine accelerators ngobuhlakani bokwenziwa, kanye nekhono elihle lokutotosa ibhethri nokuyenza ihlale amahora afika kwangu-10. Iphinde ibe nendawo enkulu yokugcina yangaphakathi, ikhamera yangemuva engu-12 MP, i-7MP FaceTimeHD ngaphambili, kanye nenzwa ye-biometric ye-TouchID.
IHuawei MatePad 11 + M-Pen
IHUAWEI MatePad 11 -...
Uhlobo lwaseShayina i-Huawei futhi yethula amamodeli edivayisi yeselula athakazelisa kakhulu ngokwenani lekhwalithi, kanye nezici ezifanele ububanzi obuphezulu. Uma ufuna ukuthola ithebhulethi ye-premium ngentengo ephusile, le modeli iyona oyidingayo. Nge Isikrini esingu-11-intshi, isixazululo esingu-2.5K FullView, isilinganiso sokuvuselela esingu-120 Hz, idizayini yokunciphisa ukukhathala kwamehlo, kuhlanganiswe nekesi, kanye nethuba lokusebenzisa i-M-Pen, ipeni elinamandla lefemu elinomklamo okhangayo, ompunga wensimbi, okhanyayo, futhi omangalisayo. ukuzwela nokuzimela.
Le thebhulethi futhi ifika ifakwe i-hardware efanayo ne-Samsung, ne-Qualcomm Snapdragon 865 eyisishiyagalombili-core SoC esekelwe ku-ARM Cortex-A, i-Adreno GPU yemidlalo yakho eyintandokazi yevidiyo, inkumbulo engu-6 GB ye-RAM, u-64 GB wesitoreji sangaphakathi, esinwebeka ngokusebenzisa i-micro SD, I-WiFi 6 yokuphequlula ngesivinini esikhulu, i-Bluetooth, i-USB-C, impilo yebhethri ende, kanye nesistimu yokusebenza ye-HarmonyOS esekelwe ku-Android futhi iyahambisana nezinhlelo zakho zokusebenza.
Yini engenziwa ngethebhulethi ngepeni?
Lapho uthenga i- ipeni ledijithali Ngethebhulethi, noma ithebhulethi enepensela esivele ifakiwe, uzokwazi ukwenza inqwaba yemisebenzi enzima noma engenakwenzeka ngaphandle kwayo. Indlela yokwenza impilo yakho ibe lula futhi engaba yinhle kokubili kochwepheshe abasebenza emkhakheni wokudala, kanye nakubancane abathanda ukudweba:
Bhala futhi uthathe amanothi: ngepeni ledijithali ungathatha amanothi ngesandla njengokungathi ubhala ephepheni, elingaguqula ithebhulethi yakho ibe incwadi yokubhalela yedijithali lapho ungathatha khona amanothi, njenge-ajenda yomuntu siqu, noma ukubhala umbhalo ngokunethezeka futhi uyisebenzise ezinhlelweni zokusebenza zemiyalezo. njll. , ngaphandle kokusebenzisa ikhibhodi ekusikrini. Kunjalo, lapho ubhala, ungagcina imibhalo nemidwebo ngefomethi yedijithali ukuze uyithumele, uyiphrinte, noma uyihlele ...
Dweba: Impela, enye yezinto ezinhle kakhulu ongayenza ukudweba, into ebalulekile kwabancane, kanye nabaklami, ama-animators nabadali, noma ukuphumula nokwenza ama-mandala, ukuthatha imidwebo yemibono, njll.
Isiginesha yedigital- Kwamanye amabhizinisi noma izinsiza, uzodinga ukusayina imibhalo yedijithali, obekungeke kwenzeke ngaphandle kwepeni ledijithali.
Njengesikhombi: Ungasebenzisa futhi i-stylus njengesikhombi, esikhundleni somunwe wakho. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uzulazule kumamenyu wesistimu nezinhlelo zokusebenza ngokukhululeka nangokunemba okukhulu. Okuthile okuhle ngemidlalo yevidiyo lapho inhloso ibalulekile ...
Ingabe wonke amapeni ethebhulethi ayafana?
I-SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE ...
Wonke amapensela awafani. Kukhona ezilula kakhulu nezingajwayelekile ezivele zisebenze njengesikhombi, ngaphandle kokuguquguquka okuningi. Ezinye sezithuthuke kakhulu futhi ngesizukulwane esisha ngasinye imisebenzi eyengeziwe iyengezwa, kanye nokuthuthukisa ukusebenza kwayo. Ukuzimela kanye nekhwalithi nakho kungahluka kakhulu kusuka kolunye uhlobo kuya kolunye, ngamamodeli ahlukene kakhulu, ngakho-ke kubalulekile ukukhetha kahle.
Mayelana nokuxhumana, kuyinto wonke umuntu ahlangana ngayo njengoba eyisebenzisa Bluetooth ukuze uxhume kuthebhulethi. Kodwa qaphela, ngoba akuzona zonke ezihambisana nanoma iyiphi ithebhulethi, ikakhulukazi lezo ezivela ku-Apple, ezisebenza kuphela kumamodeli wazo hhayi kuzo zonke izizukulwane.
I-Los Okuhamba phambili ngaphandle kokungabaza i-Samsung S-Pen ne-Apple Pencil, ebiza kakhulu, kodwa ehlanganisa ikhwalithi engcono kakhulu, ukusebenza, ukunemba kanye nokuguquguquka kokusetshenziswa. Ngenxa yabo uzokwazi ukuthatha amanothi, ukudweba noma ukufaka umbala kalula, ngaphandle kokushintsha izinsimbi zokudweba noma imigqa ngokushesha futhi kalula. Lokho kungenxa yokuthi futhi banazo izinzwa ezizwelayo ekucindezelekeni kwe-stroke, ukuthambekela kwepeni, noma ukushukuma komzimba. Lokho kuzokuvumela:
Shintsha i-stroke ngokuvumelana nokucindezela okwenzayo, njengokungathi ukwenza ngepensela langempela noma umaka.
Shintsha i-stroke uma utshekisa ipensela kakhulu noma ngaphansi, njengoba kwenzeka empeleni.
Ngokuthinta okulula ungashintsha ithuluzi kuhlelo lokusebenza olusebenzisayo (ibhulashi, ipensela, ibhulashi lomoya, upende, ...).
Ngaphezu kwalokho, emakethe uzothola namapensela edijithali amathiphu amahle, ezinye ziminyene, kuye ngokuthi yini okudingeka uyenze. Abaningi bakuvumela ukuthi ushintshe ithiphu yakho.
amaphilisi Black Friday
Izibhebhe ze-Cyber ​​​​Monday